साना छोरीलाई छोडेर भूकम्पका घाइतेको सेवामा अहोरात्र खटियौँ – Health Post Nepal
२०७६ वैशाख १३ गते ११:३४
रौतहट जिल्लाको सन्तपुर गाउँमा मेरो जन्म भयो । ०४६ सालमा श्री जनजागृति माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेँ ।
म स्कुल पढ्दादेखि नै परिवारको इच्छा मलाई नर्स बनाउने थियो । विशेषगरी मेरा बुबा मलाई नर्स बनेर बिरामीको सेवा गरेको देख्न चाहनुहुन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यायको आइओएमअन्तर्गत वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ अध्ययन सुरु गरेँ । त्यसवेला देशमा धेरै आन्दोलन भएका कारण ३ वर्षको कोषलाई पूरा गर्न ५ वर्ष लाग्यो ।
०५१ जेठमा परीक्षा सकियो । परीक्षापछि दुई दिन मात्र मैले घर बस्ने मौका पाएँ । असार १ गतेबाटै मैले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पातालमा अनमी पदमा नियुक्तिपत्र पाएँ । ३ महिना अनमीमा काम गरेपछि तेस्रो वर्षको परीक्षाफल निस्केलगत्तै प्रमाणपत्र पेस गरेपछि अस्पतालले मलाई स्टाफनर्समा नियुक्ति दियो । त्यतिवेला अनमीको तलब १ हजार ६ सयको हाराहारीमा थियो भने स्टाफनर्सको १ हजार ८ सय ५० थियो ।
त्यही वर्षको भदौमा स्टाफनर्सको लोकसेवा खुल्यो । मैले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट लोकसेवा भरेँ । मंसिरमा परीक्षा भयो । केही समयका लागि मैले सिटिइभिटीअन्तर्गत जुम्लामा काम गरेँ । कर्णाली टेक्निकल स्कुलमा शिक्षकको अभाव रहेछ । टिक्निकल एसएलसीअन्तर्गतको कार्यक्रम थियो । मलाई अनमी र अहेवलाई पढाउन लगाइयो । यसक्रममा म करिब १ वर्ष जुम्ला बसेँ । मेरा लागि त्यतिवेला जुम्ला अनकन्टारजस्तो लाग्थ्यो । म तराईमा जन्मेको, हुर्केको मान्छे, एकैचोटि जुम्ला जानुपर्दा सुरुमा मन आत्तियो पनि । त्यसवेलाको क्षण मेरो मानस–पटलमा आज पनि याद आइरहन्छ । विवाह नभएकी केटी, परिवारले जान दिइरहनुभएको थिएन, जुम्ला हिउँ पर्ने विकट क्षेत्र भनेर ।
नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८६ हजारभन्दा बढी नर्सको उत्पादन भएको छ । नर्सको महत्व बढ्दै गएको पनि सबैलाई महसुुस भएको छ । नेपालमा नर्सको धेरै महत्व छ । तर, सरकारले हालसम्म पनि नर्सलाई रोजगारी दिन सकेको छैन ।
जुम्ला पुग्नै लाग्दा मभित्र अनेक कौतुहल छाएका थिए । जुम्लाको यात्रा नै मेरा लागि प्लेनको पहिलो अनुभव थियो । प्लेनबाट हेर्दा डाँडा–काँडा, जंगललगायत साना आकारका देखिए । कर्णालीको मनोरम दृश्यले मन लोभ्यायो । त्यहाँको राम्रो वातावरण मैले अनमी, सिएमएहरूलाई पढाएँ ।
१ वर्षपछि आफू लोकसेवा पास भएको खबर पाएपछि म काठमाडौं फर्किएँ । परिवारलाई पनि टाइम दिनुपर्यो । मेरा दुईवटा छोरी छन् । महिलाबारे बाहिर नेता, विद्वान्ले जति किताबमा लेखे पनि, भाषण दिए पनि वास्तवमा घरका लागि महिला नै हुन्छन् । मैले १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पका वेला त्यो कुराको अनुभव गरेँ । भूकम्प आउँदा म वीर अस्पतालको फिमेल सिर्जिकल वार्डमा काम गर्दै थिएँ । सबैतिर हाहाकार मच्चियो । त्यतिवेलाको क्षण, बिरामीका प्रति माया त छँदैथियो, तर घरमा भएका दुई सना बालबालिकाको सम्झना पनि हरक्षण आइरहेको थियो ।
भूकम्प आइरहेको हुँदा बिरामीलाई अस्पताल भवनमा राख्न उचित नभएपछि हामीले सबै बिरामीलाई व्यवस्थित गरेर खुलामञ्चमा राख्यौँ । अघिल्लो दिन अप्रेसन भएका २ जना र २ जना बूढी आमाहरूलाई परिवारका मानिसले लान नमानेपछि उनीहरूलाई अस्पतालमै राखियो ।
भूकम्प आएको २ घण्टापछि म घर पुगेँ । घरमा बच्चा मात्र थिए । त्यही दिन श्रीमान् पनि बिहान सोलुखुम्बु जानुभएको थियो । वीर अस्पतालबाट मलाई कसैले लिफ्टसमेत दिएन, म धैरै त्रासमा रहेर घर पुगेँ । आत्तिएर एप्रोन लगाएरै भोटाहिटी पुगेकी रहेछु । घर पुग्दा बच्चाहरूलाई सकुशल पाएँ । मलाई देख्नेबित्तिकै छोरीहरूको रुवाइ सुरु भयो, जुन आजसम्म पनि मैले बिर्सन सकेकी छैन ।
छोरीहरूलाई खाने–बस्ने कुराको बन्दोबस्त आफन्तकहाँ गरेर म पुनः अस्पताल फर्किएँ । आफ्नो कर्तव्य गर्नु नै थियो । अस्पतालबाट घर फकिँदा ९ बजेको थियो । भूकम्प आइरहेको हुँदा घरमा बस्न असुरक्षित महसुुस गर्दैै दुईवटा छोरीलाई लिएर खुला चौरमा गएर सुतेँ ।
आइतबार पनि मेरो बिहानको ड्युटी परेको थियो । बच्चालाई पुनः आफन्तको घरमा छोडेर अस्पताल आएँ । लामो समयसम्म बिदा नलिएर लगातार बिरामीको सेवाका लागि म अस्पताल धाइरहेँ । आज अवार्ड पाउनेवेला पहुँच भएकाले पाउने गरेका छन्, हामी दिनरात नभनी आफ्ना बालबच्चालाई बिचल्लीमा पारेर बिरामीको सेवामा खट्ने नर्सको त नाम पनि छैन ।
नर्सले आफ्नो दिमाग र सीपअनुसार बिरामीलाई दिने सेवा दिइरहेका हुन्छन् । हाम्रौ हातका औँला पनि बराबर हुँदैनन् नि ! सबै नर्समा एउटै दिमाग, सीप, क्षमता हुँदैन । तर, पनि सबै नर्सको एउटै चाहना हुन्छ, बिरामीको सेवा राम्रो गर्न सकूँ र बिरामीलाई सफलतापूर्वक सन्चो बनाएर घर पठाउन सकियोस् ।
हामी आफ्ना बालबच्चा र परिवारलाई छोडेर बिरामीको सेवामा समर्पित थियौँ । त्यतिवेला मैले परिवारलाई भनेकी थिएँ– छोरी पढाएर सुख हुँदो रहेनछ, किनकि मभित्र त्यो पीडा लुकेको थियो, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म स्वयम् थिएँ ।
भूकम्पका वेला सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पिर, मर्का, समस्या थिए । ती दिन सम्झँदा मेरा आँखाबाट आज पनि आँसु आउँछ । तर, हामी नर्सको सेवालाई राज्यले कदर गर्न सकेको छैन ।
अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिँदा विश्व स्वास्थ्य सगंठनको मापदण्डअनुसार नै सेवा दिनुपर्छ भनिन्छ । अप्रेसन थिएटर, आइसियू, जनरल वार्डमा भएका बिरामीलाई सेवा गर्ने प्रमुख दायित्व नर्सको नै हुन्छ । तर, नेपालको ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा समेत मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन ।
पैसालाई महत्व दिएको भए म अहिले विदेशमा हुन्थेँ होला । स्वदेशमै बसेर बिरामीलाई सेवा दिने हेतुले काम गरिरहेकी छु ।
2 thoughts on “साना छोरीलाई छोडेर भूकम्पका घाइतेको सेवामा अहोरात्र खटियौँ”
itsagreat opportunity to setve ill people but getting award by the evaluation of performance is never happened in our country whether mobilise country just so how powerful people till the date.so no need to wish any award by the best work dd.
सेवा पाएकाहरुले संधै सम्झने नै छन् । नेपालमा कामको भन्दा पहुंचकै आधारमा पुरस्कृत होइन्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । सेवा अविचलित चलोस । सेवाग्राहिको मनमा बस्न पाइन्छ , त्यहि नै पुरस्कार होला । सेवामा सफलताको कामना छ ।
LeaveaReply to chandra gautam Cancel reply